Konke mayelana neHexarelin
I-1. I-Hexarelin Umlando nokubuka konke
I-2. I-Hexarelin Properties nokuthi Isebenza kanjani
I-3. Imiphumela ye-Hexarelin
I-4. Imiphumela ye-Hexarelin
I-5. Ukusetshenziswa kwe-Hexarelin
I-6. Thenga i-Peptide Hexarelin online
1. I-Hexarelin Umlando nokubuka konke
I-Peptide Hexarelin yi-hormone yokukhula ebizwa ngokuthi i-Examorelin. Isidakamizwa singe-secretagogue noma i-GHSR uhlobo lwe-hormone yokukhula. I-Hexarelin isebenza ngendlela efanayo ne-GHRP-6, kodwa kuthiwa inamandla kakhulu ngoba ivuselela ukukhiqizwa kwama-hormone amaningi okukhula emzimbeni wakho. Ucwaningo oluhlukile lubonisa ukuthi iHexarelin yiGHRH enamandla kakhulu etholakala emakethe. Kodwa-ke, imiphumela kungenzeka ukuthi ayifani ngoba imizimba yabantu ihlukile, kepha uma uthatha isilinganiso se-Hexarelin futhi unamathela emibhalweni kadokotela, uzoqiniseka ngokuhlangenwe nakho okukhulu. I Umthombo we-Hexarelin kuyinto ebalulekile yokucabangela lapho uthenga lo muthi. Ungakwazi njalo ukuthenga i-Hexarelin ku-intanethi kusuka kuwebhusayithi yethu.
2. Hexarelin Pi-roperties kanye Howubona Wi-orks
I-Hexarelin (140703-51-1) lenziwa uchungechunge lwe-amino acids, lapho lusetshenziswa emzimbeni wakho, lenza izigulane zakho ze-pituitary zikhiqize amazinga amaningi ama-hormone okukhula. Njengamanje, akukacaci ukuthi impela imithi isebenza kanjani uma ijojowe emzimbeni wakho, ikakhulu uma iqhathaniswa ne-GHRP-6 evamile. Ngaphandle kwalokho, kukhona ubufakazi obanele bokufakazela ukuthi i-Peptide Hexarelin iyinzuzo engcono kakhulu ye-GH futhi ihlinzeka imiphumela emihle uma isetshenziswe kahle.
Ngakolunye uhlangothi, idatha yesayensi kanye nemibiko ibonisa nokuthi ukusetshenziswa i-Peptide Hexarelin ukwandisa amazinga e-prolactin ne-cortisol emzimbeni wakho ngaphezu kwanoma yisiphi esinye isidakamizwa se-hormone yokukhula emakethe namuhla. Amazinga aphuthumayo e-prolactin emzimbeni wakho wesimiso angase angabi nakakhulu njengoba kungenzeka uma uthatha i-anabolic steroids ethile. Noma kunjalo, amazinga e-Ghrelin emzimbeni wakho ngeke aqiniswe yilo muthi njengoba kunjalo uma usebenzisa i-GHRP, nakuba inomakhemikhali ofanayo ne-Hexarelin.
Ucwaningo luye lwafakazela ukuthi i-Hexarelin ingenye yezinto ezisheshayo zokukhiqiza ama-hormone ezitholakala emakethe. Kodwa-ke, lo muthi uyeka ukusebenza emva kwesikhathi esithile sokusetshenziswa. Ngokuvamile, ama-hormone akho okukhula kufanele akhule masinyane phakathi kwamasonto amane okuqala omthamo. Nakuba lo mjikelezo ungaba isikhathi eside ngokuya ngeseluleko sikadokotela wakho, ucwaningo lubonisa ukuthi kunezinzuzo ezincane zokuthatha i-Hexarelin ngaphezu kwamaviki angu-16. Kumele uthathe isidakamizwa cishe nge-8 kumaviki angu-12 bese uthatha ikhefu lesilinganiso semasonto ayisithupha. Ukusetshenziswa kweHexarelin akuvimbeli ukukhiqizwa kwemvelo kwamahomoni okukhula ngamagundane akho e-pituitary njengalapho usebenzisa ama-testosterone.
3. Imiphumela ye-Hexarelin
Nakuba lokhu kuyisidakamizwa se-hormone yokukhula, i-Hexarelin inikeza imiphumela ehlukahlukene kubasebenzisi. Abadlali abavame ukusebenzisa lesi sidakamizwa ngoba kusiza ekwakhiweni kwemisipha eqondile nokuthuthukisa amandla omzimba jikelele. Ekunqumeni imijikelezo, i-Hexarelin nayo isiza ekugcineni izinga eliphansi lamafutha omzimba kanye nokuthuthukisa izinga lokutakula kwezicubu. Ukudla okunempilo kanye nokusebenza kahle kudla indima ebalulekile ngesikhathi Isilinganiso se-Hexarelin ngoba banquma izinga lemiphumela oyothola yona. Ungahlanganisa futhi izidakamizwa ezine-anabolic steroids ukuze ujabulele izinzuzo eziphezulu. Ngezenzo ze-anabolic, ngeke wazi lutho nakancane uma uthatha i-Hexarelin yedwa.
Isidakamizwa senza futhi isikhathi esihle kakhulu sonyaka noma sokunciphisa umjikelezo njengoba kuthuthukisa umzimba, ngaleyo ndlela kukhulise ukulahlekelwa kwamafutha. AmaMedics ahlinzekele nobufakazi bokuthi uHexarelin usiza kanjani ukubuyiswa kwemisipha, ikakhulukazi abagijimi abenza umsebenzi omkhulu ngaphandle. Kumele uqaphele ukuthi u-Hexarelin akakuvezi kunoma iyiphi imiphumela ye-anabolic futhi angandisa kuphela izinga lokushisa kwamafutha omzimba, okwenza kube umkhiqizo omuhle wokusika imijikelezo.
Ngaphezu kwalokho, uHexarelin unikeza izinzuzo ezihlukahlukene zokuthola nokuphulukisa kubasebenzisi ngokusho kocwaningo olwenza kube omunye wama-peptide angcono kakhulu emakethe. I-Hexarelin yisisombululo sesikhathi esifushane esinikeza izinzuzo zokuthola kabusha ezilandelayo;
Iza ekuphulukiseni kwamalungu futhi inhle kubadlali abaningi
Ukuqinisa nokuthuthukisa uhlelo lwe-neural
I-AIDS ekwakheni izicubu nama-muscle fibers
Thuthukisa ubukhulu besithambo
Ivikela inhliziyo yakho, efaka ukuphulukiswa kwama-scar tissues kanye nokukhulisa ukucindezelwa kwe-ventricle ngakwesokunxele.
4. Imiphumela ye-Hexarelin
Njenganoma imuphi omunye umuthi, i-Peptide Hexarelin ingakuveza eminye imiphumela emibi, ikakhulukazi uma uwedlula noma uhluleka ukulandela imiyalelo yokulinganisa. Eminye yemiphumela emibi ejwayelekile ihlanganisa;
Amazinga akhula weprolactin
Thuthukisa amazinga we-cortisol
5. Ukusetshenziswa kwe-Hexarelin
Umthamo wesidakamizwa ulawulwa nge-injection encane. I-peptide i-Hexarelin ikhona ngendlela ye-powder okufanele ilungiselelwe ngokuyifaka emanzini e-bacteriostatic. I-Hexarelin (140703-51-1) umthamo omuhle uwu-200mg ngosuku futhi usebenza kahle kakhulu ngezinzuzo zezokwelapha. Noma kunjalo, ngokuya ngesimo sakho noma amandla akho omzimba, udokotela wakho angandisa umthamo wokujola we-Hexarelin cishe mayelana no-400mgs ngosuku. Idatha evela ezifundweni eziqhutshwa izazi ezahlukene zezokwelapha ibonisa ukuthi izinzuzo zifanayo, noma ngabe uthatha okungaphezulu kuka-200mgs ngosuku. Ngakho-ke, ukuthatha isilinganiso esingaphezulu akusho ukuthi uzothola inzuzo eyengeziwe. I-Hexarelin stack inikeza nokuhlangenwe nakho okungcono kakhulu kwe-Hexarelin.
6. Thenga Peptide Hexarelin online
Amaningi wezidakamizwa ze-GH atholakalayo ku-intanethi, futhi ungakwazi njalo ukwenza i-oda lakho kusukela enduduzo yendlu yakho. Singumhlinzeki ohola uHexarelin esifundeni. Senza ukuletha ngesikhathi esifanele emhlabeni jikelele. I-website yethu iyasebenzisa, ngakho-ke ungakwazi ukuhamba kalula kusuka komkhiqizo owodwa kuya kwesinye usebenzisa i-smartphone yakho, ithebulethi noma ideskithophu. Noma kunjalo, sihlale sinxusa amakhasimende ukuba aqaphele lapho ekhetha umhlinzeki we-Hexarelin ofanele. Musa nje ukwenza umyalo kusuka kunoma imuphi umthombo we-Hexarelin uhlangabezane nawo. Yenza ucwaningo lwakho bese ukhetha umphakeli weHexarelin ohlonishwa kakhulu futhi onolwazi.
Ngakolunye uhlangothi, qiniseka ukuthi uyaqonda ukuthi yimiphi imithetho ezweni lakho elikushoyo ngokuthenga, ukungenisa, noma ukuphatha i-Pexide Hexarelin. Singabantu inkampani egcina umthetho, futhi ngeke sithande ukubeka amakhasimende ethu athembekile enkingeni nohulumeni abathintekayo. Ngokwesibonelo, e-US, ukuthenga i-Hexarelin online kuyomthetho kuphela uma uyisebenzisa ngezinjongo zocwaningo. Kodwa-ke, akuvumelekile uma uthenga i-Hexarelin yokusetshenziswa komuntu siqu. Qinisekisa ukuthi uqeqeshwa umjovo we-Hexarelin ngaphambi kokuba uqale ukuthatha umthamo.
Ngokufigqiwe, i-hormone yokukhula iHexarelin iphakathi kwamaphethini amakhulu kakhulu embonini. Noma kunjalo, kubiza ngaphansi kweHGH evamile futhi inikeza izinzuzo ezinkulu kumsebenzisi. Njengamanje, akukho datha kakhulu mayelana nalesi sidakamizwa, kodwa izifundo ezincane ezitholakalayo zikhombisa ukuthi I-Hexarelin powder inikeza imiphumela yekhwalithi. Qiniseka ukuthi uthole isidakamizwa emthonjeni othembekile we-Hexarelin ngemiphumela engcono. Thatha imishanguzo efanele ye-Hexarelin bese ugcina imiyalelo yokulinganisa. Uma kunoma yiluphi ukwazisa udokotela wakho ngokuhamba kwesikhathi.
I-Triptorelin Acetate Injection / Powder: Ngingayitholaphi?